TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: May 16, 2003
Ø Saraakiil sar-sare oo nabad sugida Itoobiya ka baxsaday.
Ø Wasiirka biyaha ee Itoobiya oo jagasiia la ga qaadayo.
Ø Itoobiya oo u ruclaynaysa sidii ay Soomaliya u gumaysan lahayd.
Ø Kofi Annan oo sheegay in arrinta Bademe ay kama denbays tahay.
Ø Warbixin ka soo baxday hogaanka sare ee Jabhada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya iyo Suugaan halgameed aad ka heli doontaan.
Saraakiil sar-sare oo nabad sugida Itoobiya ka baxsaday.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa yaa sheegaya in seddex sargaal oo ka tirsan ciidamada nabad suguda ah ee Itoobiya ay magangalyo siyaasadeed waydiisteen wadanka Denmark. Sadexdan sarkaal ayaa la sheegay in guddi lagu magacaabo “guddiiga qiimayntu” uu digniin adag siiyay, ka dib markii uu guddigu la kulmay shaqaalaha sharikada diyuuradaha ee Itoobiya, halkaasoo ay seddexdan sargaal dhinaca ammaanka u qaabilsanaayeen. Sharikada dayuuradaha ee Itoobiya ee Ethiopian Airlines ayaa iyadu baxsiga saraakiishaa ka aamustay oo aan wax faallo ah ka bixinin. Taliska uu madaxda ka yahay keligii taliye Meles Zenawi ayaa sameeyay guddi uu ugu magac daray guddiga qiimaynta, oo lagu dhawaaqay inay qiimayso waxqabadka shaqaalaha dawlada, hase yeeshee ujeeddada dhabta ah ka denbaysa lagu tilmaamay inay tahay sidii loo dabar-goyn lahaa dadka ka soo horjeeda siyaasada xukuumada Zenawi.
Dhinaca kale warar xogogaal ah oo aanu ka helay ilo ku dhadhaw wasaarada gaashaandhigga ee Itoobiya ayaa sheegaya in dhawaan xilka laga qaadi doono afar saraagal oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Itoobiya.
Warkani waxay soo shaac-bexeen, ka dib markii ay shir qarsoodi ah yeesheen wasiirka gaashaandhigga Aba Dula Gemada, taliyaha ciidamada Itoobiyaa Jeneraal Samora Yenus iyo major general Bacha Debela, oo ka mid ah ragga ugu awooda badan wasaarada gaashaandhigga ee Itoobiya.
Saraakiishan xilka laga qaadayo, oo dhammaantood xilal sarsare ka hayay ciimadad qalabka sida, isla markaana ka tirsan ururka TPLF, ayaa la sheegay in looga shakiyay inay wadaan hawlo ka dhan ah xukuumada Zenawi, waxaana lagu soo eedeeyay inay xilalkoodii si fiican u gudan waayeen, hase yeeshee waxaa loogu baaqay inay hawlgab noqdaan, si loo qariyo khilaafka wali ka sii dhex oogan ururka TPLF, balse waxaa la sheegayaa in saraakiishaasi ay ku gacan saydheen tuhunka loo soo jeediyay.
Dadka siyaasada Itoobiya indha indheeya ayaa xil ka qaadistan u arka mid lagu sifeeynayo saaraakiisha ciidamada ee laga shaki qabo, waxayna arrintani xoogaysatay, ka dib markii uu Males Zenawi la wareegay awoodda xil ka qaadista sarakiisha sarsare ee ciidamada qalabka sida.
Wasiirka biyaha ee Itoobiya oo jagasiia la ga qaadayo.
Wasiiraka biyaha ee Itoobiya Shiferaw Jarso ayaa la sheegay in laga qaadi doono xilka wasiirnimo ee hada uu hayo, waxaana loo magacaabi doonaa inuu noqdo duqa magaalada Diridhabo, arrintaasoo ay dad badan oo Itoobiyaan ahi aad ula yaabban yihiin.
Xilka wasiirnimo ee laga xayuubinayo Shiferaw Jarso waxaa la sheegay inuu hordhac u yahay masuuliyiin badan uu xukuumada Zenawi ka tirsan, kuwaasoo xilalkooda laga qaadi doono.
Dhinaca kale afhayeenka baarlamaanka Itoobiya Dawit Yohannes ayay ciidamada boolisku warysi la yeesheen, ka dib markii uu raad musqmaasuq ahi soo galay.
Dawit waxa lagu soo eedeeyay inuu musuqmaasuqay lacag gaadhaysa 7 milyan oo Birr, waxayna lacagtani la xidhiidhaa xidhaygii la xidhay gudoomiyiihi guddiga doorashooyinka ee Itoobiya Assefa Birru oo Dawit uu adeer u yahay.
Itoobiya oo u ruclaynaysa sidii ay Soomaliya u gumaysan lahayd.
Xukuumada Itoobiya ayaa warqad qoraal ah u dirtay Qaramada Midoobey, taasoo ay
kaga codsaneyso in la siiyo tirada ugu badan ciidammada nabad ilaalinta loo gaynayo dalka Soomaaliya, si ay xasilloonida u sugaan, ka hor intayna hawleheeda billaabin xukuumada la filayo inay ka soo baxdo wadaxoojoodyada nabadda ee ka socda dalka Kenya.
Xukuumada Itoobiya waxay codsatay in ilaa 4000 oo ciidan ah loo oggolaado inay Soomaaliya u dirto, waxayna ku andacootay inay arrimaha Soomaaliya aad ugu dhowdahay, isla markaana ay xudduud dheer la la leedahay dalka Soomaaliya.
Guddiga IGAD ee dhexdhexaadinaya ergooyinka soomaalida ayaa dhawaan shaaca ka qaaday qaaday in Qaramada Midoobay ay oggolaatay in Soomaaliya loo diro ciidamo nabad ilaalin ah oo u badan dalalka ku yaalla qaaradda Africa, waxayna ciidamadaasi hawlgalladooda billaabi doonaan marka dhidibbada loo taago dawlad soomaaliyeed iyo baarlamaan.
Hase yeeshee warar ku dhadhow guddiga farsamada ee IGAD ee gacanta ku haya shirka dib u heshiisiin soomaalida uga socda dalka Kenya ayaa sheegaya in ciidamada nabad ilaalinta loo gaynayo dalka Soomaaliya ayna ka qayb qaadanaynin dalalka sida gaarka ah u daneeya arrimaha Soomaaliya, isla markaasna ay ciidamadaasi noqon doonaan kuwo si toos ah uga amar qaata Ururka Midowga Afrika, arrintaasoo ay Itoobiya si wayn uga soo horjeedsatay.
Kofi Annan oo sheegay in arrinta Bademe ay kama denbays tahay.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Kofi Annan ayaa sheegay in go’aankii 13 abriil ee sanadkii hore ka soo baxay guddiga xallinta khilaafka xuduudeed ee Itoobiya iyo Eritereya uu kama denbays yahay, isla markaana ayna jirin dood denbe oo ka furan go’aankaas.
Xoghayuhu wuxuu arrintan kaga jawaabayay warqad uu keligii taliye Meles Zenawi u diray xogahayaha guud ee Qaramada Midoobey, taasoo uu kaga codsaday in Qaramada Midoobey ay dib ugu noqoto go’aankii guddiga, oo magaalada Bademe, oo bud-dhige u ahayd dagaalkii soohdinta ee labada dal dhex maray labo sano ka hor, u xukumay dalka Eritereya.
Wararka arrintan la xidhiidha ee Itoobiya ka soo baxaya ayaa sheegaya in keligii taliye Meles Zenawi uu soo kiraystay labo garyaqaan oo u dhashay dalka Koonfurta Afrika, kuwaasoo uu doonayo inay Itoobiya u raadiyaan qiil sharci ah oo lagaga maarmi karo go’aanka guddiga xuduuda, waxaana arrintaas si wayn uga cadhooday qaryaaqanada itoobiyaanka ah, oo rumaysan in Meles Zenawi uu yeedhidda garyqaannadaas lacag uun ku lunsanayo.
Dhinaca kale dawlada Eritereya ayaa ku gacan saydhay inay wax wadxaajood ah ka furayso arrinta xuduuda ay Itoobiya la wadaagto, oo ay sheegtay in go’aankii guddiga xuduuddu uu si kama denbays ah u soo gabagabeeyay.
Wasiirka ku meelgaadhka ah ee warfaafinta ee dalka Eritereya Cali Cabdu Axmed ayaa horraantii toddobaadkan sheegay dawladiisu ay soo afjarayso is-waydiinaha ka imanaya in laga yaabo in wadaxaajood denbe laga furo arrinata xuduuda, wuxuuna intaas ku daray in go’aanka guddigu uu soo afjaray arrimihii la xidhiidhay khilaafka xuduuda ee u dhexeeyay dalkiisa iyo Itoobiya.
Warbixin ka soo baxday hogaanka sare ee Jabhada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya.
Shacabka Somalida Ogadenia waxaa 100/sano ka badan gumaysta dawladda Ethiopia. Mudadaas dheer ee dadkaasi gumaysiga ku jiray, waxaa maamulkiisa iska soo badalay, 3/dex Rajim oo kala ah: Boqortooyinkii Mililik iyo Xayle Silaase, Nidaamkii hanti wadaaga ahaa ee Mingise Hayle Maryam iyo ugu dambayntii midkan hadda haya oo sheeganaaya in uu yahay demoqoraadi.
Saddexdaas Rajiib oo aragti ahaan aad u kala fogaa, hadana istratijiyo ahaan waxay isaga mid yihiin, gumaysiga Ogadenia, iyo in Shacbiga Somalida Ogadenia laga ilaaliyo wax kasta oo horumar shacbigaas u keeni kara. Sida waxbarashada, Caafimaad, dhismaha Wadooyinka & isgaadhsiinta, Ganacsiga, Tacbashada dhulka, Nabad ku noolaanshaha iwm.
Mudadaas dheer, dalkaas wuxuu ahaa goob dagaal. Sharciga lagu xukumo dalkaas, waa midka mileteriga ee waqtiga dagaalka. Xaakimka runta ah waa Askariga qoriga sita. Maxkamaduna waa go,aankiisa, kuu rabo ayuu toogan, kuu rabana wuu xidhi, kuu rabana wuu dhici, gabadhuu rabana wuu kufsan, falkuu sameeyo askarigu su,aal ka daba iman ma jirto, rafcaana ma leh.
Waxbarasho lama ogola, dalka Ogaadenya oo ka kooban 9 Gobol, 48 Dagmo (waa intay ogolyihiine), dadka ku noolna lagu qiyaaso 5 -7/milyan, wuxuu leeyahay hal dugsi sare iyo hal isbitaal oo uu Isbitaalka ka tagay gumaysigii talyaaniga. Qofka aqoon yahanka ah, dalka kama shaqaysan karo, si nabad galyo ahna uguma noolaan karo.
Ciidamada Ethiopia ee Ogadenia ka hawl gala, haddaan tusaale u qaadano fal danbiyeedka
ay sameeyeen, intii u dhexaysay October sanadkii 2002 – March sanadkan 20003, waxay noqon sidan:
Tirada shacbiga aan waxba galabsan ee la toogtay:
Tirada dadka la xidhay: 6750/Ruux.
Haweenka la kufsaday mudadaas: 125/gabdhod.
Inta si naxariis daro ah loo jidh-dilay: 1480/Ruux.
Inta jidh-dilkaas u naafouday: 250/Ruux.
Dadka habeenka lala baxo oo meel ay jiraan la ogayn: 193/ruux
Lacagta qof kasta oo la xidho lagu ganaaxay. 2000/ Bir.
Lacagta tuulooyin & dad gaar ah lagu ganaaxay $: 1,5/milyan.
Xoolaha Askartu qalatay ama dhacday, Adhi: 8000/ Neef.
Geel: 1430/ Neef.
Tuulooyinka la gubay: 15/Tuulo.
Hantida Tuulooyinka laga bililiqaystay $: 3/milion qiyastii.
Waxaa lala wareegay 120 Baabuur iyo badeecaddii saarayd.
Waxaa caadi u noqotay ciidamada Itoobiya.
· Miineeynta wadooyinka ceelasha waaweyn soo gala.
· Gubida kaymaha iyo dhul daaqsimeedka xoolaha.
· Ceelasha oo qar la Aaso, kuwo kalena dadka laga oodo xiliga dad weynuhu ugu baahi badan yahay Biyaha.
· Xoolaha oo la xera-oodo ilaa ganaaxa laga bixiyo, ama qaraabadu soo xerayso ninka jabhadda kaga jira halkaas lagu hayo.
· Magaalooyinka iyo Tuulooyinka qaarkood oo muddo dheer la go’doomiyo.
· Xadka Somalida oo la xidho si ganacsiga iyo nolosha dadka cidhiidhi loo galiyo, iyo in dhamaan gaadiidka xad Somalia ka soo gala lala wareego.
· Xoolaha safarada dalka gudihiisa oo kontarabaan lagu sheego si loola wareego.
· Askarta Ethiopia oo markay labisan yihiin makhaayadaha shacbiga lacag laaan wax kaga cuna.
· Dhalin yarada Reer Ogadenya oo ciidamada Ethiopia sida xoolaha u rartaan,
marka rarka laga dajiyana aan wax cunto ah la siinaynin iyo dhibaatooyin badan oo kale oo aanaa halkan ku soo koobi karin.
Sidaas daraadeed waxaan hayadaha xuquuqda aadamaha daneeya, dawladaha nabada jecel iyo guud ahaan beesha caalamka u soo jeedinaynaa in ayna Indhaha ka laaban gumaadka ba,an ee lagu hayo Shacbiga dulman ee ku jira Gacanta adag ee gumaysiga Itoobiya.